Kava Warbixiinta - J & S Botanics
[Faahfaahinta] Kavalactones ≥ 30.0%
[Imaansho] budada Yellow
[Walxaha size] 80Mesh
[Mudada nolosha] 24 Months
[Miisaanka Net] 25kgs / durbaanka
[Waa maxay Kava?]
Kava, sidoo kale loo yaqaan methysticum Piper, Kava Kava, iyo 'Awa, waa hooyo ah geed yar oo gasiiradahana ee South Pacific. The xididkii iyo jirridaha waxaa la sameeyey galay aan aalkolo, cabitaan maskaxda in badan ayaa la isticmaalay bulsho ahaan iyo maydku boqolaal sano ee Hawaii, Fiji, iyo Tonga.
Kava waxaa dhaqan ahaan loo diyaariyey by gelinayn xidid dhul iyo istaajiyo galay jawaan furan dhismayaal, biyo, iyo Tuujiya juice galay weyn, xardhanaa, iyo maddiibad alwaax. Qumbaha koob bar-madfac ayaa lagu rusheeyey oo waxay buuxisay - style baaquli feer. Ka dib markii la cabo koob ama laba dareen ah dareenka adkeeyay weheliso nasashada bilaabaa inuu soo. In kasta oo ay tahay nasteexo, waa ka duwan khamriga in fikirrada sii cad. dhadhan waa inta inoffensive, laakiin qaar ka mid ah ka heli in ay is qaadataa loo isticmaalaa in lagu, runtii waxay ku xiran tahay doorashada for dhadhan cammuud ah.
[Kava waa Safe in Isticmaal]
The benefits ammaan ah oo wax ku ool ah Kava in laga nafiso calaamadaha walaaca ayaa sidoo kale taageeray in la Meta-falanqaynta, dib u eegis tirakoobka nidaamsan toddoba tijaabo aadanaha daabacay 2000 ee Journal of Clinical Psychopharmacology, iyo mar kale in dib u eegis la mid muhiim ah in 2001. Baaritaanku wuxuu heli waayeen saameynta weyn loo kasin la xiriira sumoobo beerka.
Gebogebadii, beerka waxaa saameeya waxyaaba badan, oo ay ku jiraan qoray iyo daawada ahayn, iyo sidoo kale khamriga, oo waa sabab weyn oo dhaawaca beerka. waa in aan ogaannaa in dhalatada oo daawooyin awood, in laguula dhaqmo si ixtiraam ku haboon oo ku saabsan isdhexgalka iman kara iyo sumoobo, oo ay ku jiraan in beerka. Dhinaca kale, Kava Kava ee margin of ammaanka fog dhaafa in ka mid ah waxaa u dhigma dawooyinka.
Kava ee kaa dhimi kartaa dhowr ah oo dhibaatooyin, gaar ahaan stress, welwel, iyo carqaladeeyey nidaamyada hurdo. Si kastaba ha ahaatee, anxiolytic Kava ee (anti-argagaxa ama anti-anxiety wakiilka) iyo guryaha dejinaaya mowjadda karaan cudurro kale oo badan oo cadaadis iyo walaac la xiriira.
1. Kava sida Therapy ah Walaaca
2. Kava dawona ma laga yaabaa in isku bed dhaleysnimada Mood
4. Dagaalamo Da'da Dhicis
5. Jooji Sigaar Aid
6. La dagaalanka xanuunka sida xanuunka ah
Next: soosaaray Marigold
Curcuma Longa Warbixiinta
Warbixiinta Root Ginger
Warbixiinta Ginseng Siberian